Zvokuita kana iwe wakakanganwa yako iPhone kana iPad yekukiya kiyi IPhone nhau
Chii chaunofanira kuita kana ukakanganwa yako iPhone kana iPad yekukiya kiyi
Kunyangwe zvingaite senge zvakaoma kuti izvi zviitike, vashandisi vazhinji veIfree vanokanganwa yavo yekukiya kodhi, kunyanya izvozvi sezvo matsimba mazhinji aine chigunwe chekunzwa, iyo kodhi haina kushandiswa kakawanda sepakutanga. iOS ine chengetedzo sisitimu iyo pasina kupinda pasiwedhi zvisiri izvo imwe nhamba yenguva iyo chishandiso chichavharirwa, kana iwe ungatogona kurasikirwa neruzivo rwese irwo Chii chaungaite kana iwe ukakanganwa kiyi yekukiya? Usatombo kunetseka, zvinonyanya kuitika kuti hauna kurasikirwa neruzivo rwese uye iwe unogona kudzoreredza mudziyo wako. Isu tinotsanangura dzimwe nzira dzauinadzo.
1 Backup ishamwari yako
2 Kudzorera mudziyo wako ndiyo yako chete imwe sarudzo
3 Kuchengetedzwa kunovimbiswa
4 Hapana chekuchengetedza? Iwe warasa iyo data
5 Apple inofanirwa kuvandudza iyi chengetedzo?
Backup ishamwari yako
Iko hakuna nzira yekupfuura yekukiya kiyi, uye hongu unowana imwe here, udza FBI iyo ichakupa mubairo wakanaka nezvayo. Iyo chete imwe nzira yatinayo tisina nzira yekudzosera yako yekukiya kiyi ndeyekuti tagadzira backup kopi kungave muTunes kana muICloud. Zvichienderana nezuva rekuchengetedza, iyo data yauchapora ichave yechinyakare kana yazvino. Neichi chikonzero, isu tinogara tichikurudzira kuti iwe uve neICloud backups anogara achishanda, zvekuti anoitwa otomatiki zuva nezuva uye nekudaro udzivise aya matambudziko. Kukundikana izvo, unogona kugara uchishandisa iTunes, asi pane izvi unofanirwa kubatanidza iyo iPhone kana iPad kune komputa yako, chimwe chinhu chishoma uye chisingawanzoitika.
Kudzorera mudziyo wako ndiyo yako chete imwe sarudzo
Iwe une backup yakaitwa? Saka usazvidya moyo, kunyange iwe uchafanirwa kushandisa imwe nguva kudzoreredza mudziyo uyezve kupora iyo backup, kungave kuburikidza iTunes kana iCloud. Batanidza iyo iPhone kana iPad kune komputa kwawakamboenzanisira iyo wobva wadzvanya pane "Dzosera" bhatani kuti uise yazvino firmware iripo, siya yako iPhone yakachena zvakakwana uye wozogona kudzoreredza backup yakachengetwa pakombuta iyoyo. Kana uine Tsvaga yangu iPhone inoshanda kuti ukwanise kudzoreredza kuburikidza neTunes iwe uchafanirwa kuisa iyo iPhone muKudzoreredza modhi kuti ikubvumidze iwe kuidzosera, uye ipapo uchafanirwa kuisa yako iCloud data kuti uwanezve kuwana.
Unogona kunge usati wamboshandisa komputa kuyananisa yako iPhone kana iPad, saka unofanira kushandisa iCloud kudzima ruzivo uyezve kukwanisa kupora kopi yakachengetwa muICloud. Kuti uite izvi, enda kune iyo iCloud peji (www.icloud.com), isa yako yekuwana data uye uchishandisa iyo "Tsvaga yangu iPhone» kunyorera kudzima chishandiso. Mushure meizvozvo iwe uchafanirwa kumisikidza uye panguva iyoyo iyo inokumbira iwe iyo iCloud backup yaunoda kushandisa.
Zviri nyore sei kupfuudza kiyi yekukiya? Hongu uye kwete. Kiyi yekukiya iri nyore chaizvo kubvisa, asi dambudziko richauya gare gare parinokumbira kiyi yako iCloud. Kana iwe uine "Tsvaga yangu iPhone" yakamisikidzwa, uchafanirwa kuisa yako Apple password kuti uenderere mberi nenzira yacho. Iyi kiyi yekupedzisira, yakasiyana nekiyi yekukiya, yakakosha kune chero nhanho dzatsanangurwa pamusoro. Kana iwe usina, ndine urombo kukuudza kuti hapana munhu anozogona kukubatsira kunze kweApple pachayo.
Hapana chekuchengetedza? Iwe warasa iyo data
Ok, izvi zvese zvakanaka kana ndine backup yapfuura, asi ko kana ndikasadaro? Saka ndine hurombo kukuudza kuti yako iPhone icharamba ichishanda, unogona kuiinura kuburikidza nekudzosa kwakachena, asi unenge warasa rese data iwe rawaive naro.
Apple inofanirwa kuvandudza iyi chengetedzo?
Kune vazhinji vanoti Apple inofanirwa kugadzirisa poindi yekuchengetedzwa kwemidziyo yavo kudzivirira njodzi yekurasa data rako kana ukakanganwa password. Kuti izvi zviitike, iwe unofanirwa, mukuwedzera pakukanganwa password yekukiya, hauna kunge waita chero backup makopi., kureva kuti, iwe ungadai wakakanganisa zvakakomba zviviri zvisingaregererwe, kunyanya kana iyo data iri pa iPhone yako kana iPad yakakosha.
Kune vanhu vazhinji vanobvunza kuti kiyi yekukiya inogona kudzoreredzwa uchishandisa yako iCloud account, asi izvi zvinotora izvo pakupedzisira zvese zvaizoderedzwa kuita kiyi, iyo yeICloud, iko kuchengetedzeka uye kuvanzika kwaisazovimbiswa sezvino. Semuenzaniso, dai izvi zvaive zvakadaro, iyo iPhone yaive neFBI ingadai yakavhurwa kare kare. Apple ingamanikidzwa kuwedzera izvi sesarudzo here? Haisi kuraswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 9 » Chii chaunofanira kuita kana ukakanganwa yako iPhone kana iPad yekukiya kiyi
Jose espinoza akadaro
Pindura kuna Jose Espinoza
China inotevera Apple Store ichasvika munaKurume 19
Isu tinokuudza iwe dzese nhau nezve Kodi 17 yeApple TV 4